musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Kugamuchira Vaenzi Indasitiri Kuchengeteka Kwakazara Nemakomba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kuputsa dhata kunogona kugadzira kuitika kwemasangano mazhinji kuburikidza nekushandiswazve kwehunyanzvi kumunhu ega uye bhizinesi account.
Hospitality indasitiri makambani ane chete 29% yemamwe mapassword.
Kushandiswazve kwepassword idambudziko hombe rinokanganisa zvakanyanya.
Kana rimwe password rakakanganiswa, mamwe maakaunzi akaiswa mungozi zvakare.
Vaeni indasitiri vashandi vanorwira nemapassword, mushumo mutsva weindasitiri unoratidza. Pakati pe 17 maindasitiri akaongororwa, vashandi veindasitiri yekugamuchira vaeni vakashandisa zita rekambani yavo se password kazhinji. Panzvimbo pekuuya neyakavanzika password kuti uchengetedze maakaundi avo ebhizinesi, vanhu vanongoisa yavo zita rekambani se password yavo.
Pamusoro peizvozvo, makambani ekugamuchira vaeni ane 29% chete yemamwe mapassword. Izvi zvinoreva kuti vanopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevashandi vanoshandisa zvekare mapassword avo kumaaccount.
Kushandiswazve kwepassword idambudziko hombe rinoisa tyisidziro huru kune vese vatengi nemabhizinesi. Kana pasiwedhi imwe ikakanganiswa, mamwe maakaundi ese ari panjodzi zvakare, nyanzvi dzekuchengetedza dzinonyevera.
Tsvagiridzo iyi yakaratidzawo mapassword epamusoro gumi anoshandiswa nevashandisi veindasitiri. Zvinotyisa, iro rakajairika i "password".
Heano mahwindo epamusoro gumi muindasitiri yekugamuchira vaeni:
Zita rekambani *
Zita rekambani ***
Zita rekambani 1 *
zita rekambani1 *
Vatsvagurudzo vakaongorora data kubva kuruzhinji rwevatatu-bato rakakanganisa makambani Fortune 500. Pakazara, iyo yakaongororwa dhata yaisanganisira 15,603,438 kutyora uye yakarongedzwa kuita gumi nematanhatu maindasitiri akasiyana. Vatsvaguriri vakatarisa mukati mapassword epamusoro gumi anoshandiswa muindasitiri yega yega, iyo percentile yemamwe mapassword, uye nhamba yekutyorwa kwedatha kunokanganisa indasitiri yega yega.